ဟဒီးဆ်: အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် တစ်ဦးတစ်ယောက်အား ကောင်းစေလိုလျှင် ထိုသူ့အား စမ်းသပ်ရန် အလို့ငှာ ဘေးဒုက္ခများ သက်ရောက်စေတော်မူသည်။ - တမန်တော်မြတ်(ﷺ)၏ ဟဒီးဆ်ဩဝါဒတော် ဘာသာပြန် စွယ်စုံကျမ်း
ဟဒီးဆ်: အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် တစ်ဦးတစ်ယောက်အား ကောင်းစေလိုလျှင် ထိုသူ့အား စမ်းသပ်ရန် အလို့ငှာ ဘေးဒုက္ခများ သက်ရောက်စေတော်မူသည်။
အမျိုးအစား: အကီဒဟ် ယုံကြည်ချက်။ . သတ်က်ဒီးရ် သတ်မှတ်ချက်နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် အီမာန်သက်ဝင်ယုံကြည်ခြင်း။ . သတ်က်ဒီးရ်သတ်မှတ်ချက်နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုင်ရာ မဆ်အလဟ်များ။ .
အဗူဟုရိုင်ရဟ်(ရဿွိယလ္လာဟုအန်ဟု)က ဆင့်ပြန်ခဲ့သည်။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ရစူလ်တမန်တော် (ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်) မိန့်ကြားတော်မူသည်။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် တစ်ဦးတစ်ယောက်အား ကောင်းစေလိုလျှင် ထိုသူ့အား စမ်းသပ်ရန် အလို့ငှာ ဘေးဒုက္ခများ သက်ရောက်စေတော်မူသည်။
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် မိမိ၏ ကျွန်များအတွက် ကောင်းကျိုးကို လိုလားတော်မူလျှင် ၎င်းတို့၏ အသက်ခန္ဓာများ၊ ဥစ္စာပစ္စည်းများ၊ သားသမီးများနှင့် ပတ်သက်၍ စမ်းသပ်တော်မူသည်။ ထိုစမ်းသပ်မှုများသည် ၎င်းတို့၏ အပြစ်အကုသိုလ်များကို ပယ်ဖျက်ပေးရန်နှင့် ၎င်းတို့၏ အဆင့်အတန်းများကို မြင့်မားစေရန်အတွက် အကြောင်းခံပင်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ဉာဏ်အမြော်အမြင်ရှိသူတစ်ဦးသည် ဘေးဒုက္ခတို့၏ အကျိုးဆက်များကို စဉ်းစားကြည့်ပါက၊ မုချ ထိုအရာများသည် လောကီ၊ လောကုတ္တရာ နှစ်ဌာနစလုံး၌ ကောင်းကျိုးရှိကြောင်း တွေ့ရှိရမည်ဖြစ်သည်။ လောကီကောင်းကျိုးဟူသည် ဒုက္ခရောက်သည့်အခါ ဒုအာဆုမွန်ပြုခြင်း၊ ကျိုးနွံခြင်းခြင်း၊ မိမိ၏လိုအပ်ချက်ကို ထုတ်ဖော်ခြင်းတို့ဖြင့် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံတော်သို့ ပြန်လှည့်ခြင်းဖြစ်သည်။ လောကုတ္တရာကောင်းကျိုးဟူသည် အပြစ်အကုသိုလ်များကို ပယ်ဖျက်ပေးခြင်းနှင့် အဆင့်အတန်းများကို မြင့်မားစေခြင်းဖြစ်သည်။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် မိန့်တော်မူသည်မှာ (ထို့ပြင်တစ်ဝ (အို-မုအ်မင်န် အပေါင်းတို့) မချွတ်ဧကန် ငါအရှင်မြတ်သည် အသင်တို့ကို တစ်စုံတစ်ခုသော ကြောက်ရွံ့ စိုးရိမ်စေခြင်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ငတ်မွတ်စေခြင်းအားဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ဥစ္စာပစ္စည်းများ ဆုံးပါးစေခြင်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ အသက်သေကြေ ပျက်စီးစေခြင်းဖြင့် သော်လည်းကောင်း၊ ကောက်ပဲသီးနှံများ ပျက်ပြားစေခြင်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ [(တစ်နည်း) သားသမီးများ သေဆုံးစေခြင်းဖြင့် သော်လည်းကောင်း၊] စမ်းသပ်တော်မူလတ္တံ့။ သို့ရာတွင် (ထိုကဲ့သို့ စမ်းသပ်သော ဘေးအန္တရာယ်များကို) ခန္တီတရားဖြင့် သည်းခံသူအပေါင်းအား ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာ ကောင်းချီးမင်္ဂလာသတင်းကို (အို-နဗီတမန်တော်မုဟမ္မဒ်) အသင်သည် ပြောကြားပါလေ။) (ကုရ်အာန်-၂း၁၅၅) ဤဟဒီးဆ်သြဝါဒတော်၌ ဘေးဒုက္ခခံစားရသူနှင့်ပတ်သက်၍ မည်သည့်ကန့်သတ်ချက်မျှမပါရှိဘဲ “မွတွ်လပ်က်” ယေဘုယျသဘောသာ ဖေါ်ပြထားသည်။ ထိုယေဘုယျသဘောအား အခြားသောဩဝါဒတော်များဖြင့် ကန့်သတ်လိုက်သည်။ (ဆိုလိုသည်မှာ ဘေးဒုက္ခခံစားရသူတိုင်း ဖေါ်ပြပါအကျိုးရလဒ်များကို မရရှိနိုင်ဘဲ ထိုအကျိုးရလဒ်ကို ခံစားနိုင်ရန် ဘေးဒုက္ခခံစားရသူ၌ အရည်အချင်းအချို့ရှိရပါမည်)။ အလိုသဘောမှာ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် တစ်ဦးတစ်ယောက်အား ကောင်းစေလို၍ ထိုသူ့အား စမ်းသပ်ရန်အလို့ငှာ ဘေးဒုက္ခများ သက်ရောက်စေတော်မူသည့်အခါ ၎င်းကလည်း ခန္တီတရားထားပြီး အကျိုးကုသိုလ်ရရှိရန် မျှော်ကိုးမှသာ ကောင်းကျိုးများ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ခန္တီတရားမရှိပါက လူသားသည် တစ်ခါတစ်ရံ ဘေးဒုက္ခများစွာနှင့် ကြုံတွေ့ခဲ့ရသော်လည်း မည်သည့်ကောင်းကျိုးမျှ မရရှိပေ။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကလည်း သူ့အား ကောင်းကျိုးပြုရန် မလိုလားခဲ့ပေ။ သို့ဖြစ်၍ ကာဖိရ်သွေဖည်ငြင်းပယ်သူများသည် များစွာသော ဘေးဒုက္ခများနှင့် ကြုံတွေ့ကြရသော်လည်း ၎င်းတို့သည် သေဆုံးသည်အထိ မိမိတို့၏ ကုဖ်ရ် သွေဖည်ငြင်းပယ်မှုအပေါ်၌ပင် ရှိနေခဲ့ကြသည်။ ဤသို့သော သူများနှင့်ပတ်သက်၍ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် မည်သည့်ကောင်းကျိုးကိုမျှ မလိုလားကြောင်း သံသယ ဖြစ်ရန်မလိုပေ။
ဧကန်မလွဲ မုအ်မင်န် သက်ဝင်ယုံကြည်သူသည် သာသနာရေး၌ဖြစ်စေ၊ ဥစ္စာပစ္စည်း၌ဖြစ်စေ အမျိုးမျိုးသော ဘေးဒုက္ခများနှင့် ရင်ဆိုင်ရမည်။
မွတ်စ်လင်တို့အတွက် ကြီးကျယ်လှသော သတင်းကောင်းတစ်ခုတင်ပြထားသည်။ မွတ်စ်လင်မ်တိုင်းသည် ထိခိုက်နစ်နာမှုမှ မလွတ်ကင်းနိုင်ပေ။
ဘေးဒုက္ခ၊စမ်းသပ်မှုများသည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်က မိမိကျွန်အားချစ်ခင်နှစ်သက်သည့် လက္ခဏာတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ အဆင့်အတန်း၊ ဂုဏ်ရည်အား မြင့်မားစေရန်နှင့် ၎င်း၏ အပြစ်အကုသိုလ်များကို ပယ်ဖျက်ပေးရန် အတွက်ဖြစ်သည်။
အကီဒဟ် ယုံကြည်ချက်။ . သတ်က်ဒီးရ် သတ်မှတ်ချက်နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် အီမာန်သက်ဝင်ယုံကြည်ခြင်း။ . သတ်က်ဒီးရ်သတ်မှတ်ချက်နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုင်ရာ မဆ်အလဟ်များ။ .
ကြီးမားလှသည့် ဒုက္ခစမ်းသပ်မှုနဲ့အတူ ကြီးကျယ်လှသည့် အကျိုးကုသိုလ်လည်း ရှိသည်။ ဧကန်အမှန်ပင် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် လူအုပ်စုတစ်စုအားချစ်မြတ်နိုးတော်မူလျှင် ၎င်းတို့အား စမ်းသပ်တော်မူသည်။ အကြင်သူသည် ဤစမ်းသပ်မှုအပေါ် ကျေနပ်လျှင် ၎င်းသည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ကျေနပ်နှစ်သက်မှုကို ရရှိမည်။ အကြင်သူသည် ဤစမ်းသပ်မှုအပေါ် ကျေနပ်မှုမရှိလျှင်၎င်းသည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ အမျက်တော်ကိုသာရရှိမည်။